Hay?ada IMC oo adeegyo lagu ilaalinayo caafimaadka siisay dad ku baragkacay fatahada shabeelle – Radio Daljir
Oktoobar 12, 2013 5:46 b 0
Jowhar, October 12, 2013 – Baragkacayaasha ku nool gobolka shabeelaha hoose oo gargaar dalbanayey bilihii ina dhaafay ayaa helay jawaab caafimaad, xili maanta ay adeega marakaneecooyinka ay siisay hay?ada IMC International medical Corps.
Hay?ada IMC waxaa ay adeegaas marakeenada u qaybisay boqolaal dadweyne Baragkacayaal ah oo ku sugan tuulada Kongo oo ilaa 5km u jirta degmada Jowhar ee xaruunta gobolka shabeelaha dhexe, halkaas oo ay ku taalo xero wayn oo ay ku jiraan dad danyar ah.
Gudoomiyaha degmada Jowhar Maxamed Aamiin Cismaan Xaaji oo warbaahinta la hadlay waxaa uu sheegay in dadka loo qaybiyey Marakaneecada in ay soo tageen deeganada Garaash iyo Danyaareey ee isla gobolka shabeelaha dhexe, kadib fatahaadii webiga.
Maxamed Aamiin waxaa uu ugu baaqay qurba joogta Soomaalida in ay gargaar la soo gaaraan dadka gobolka shabeelaha dhexe ee khasaaraha daran uu ka soo gaartay fatahaada webiga shabeelle.
IMC waxay horay gargaar noocaan oo kale ah ugu qaybisay baragkacayaal jooga isla gobolka, kuwaas oo ay siisay lacago adeeg, dhar iyo caagaga biyaha lagu dhaansado oo muhiim u ah nolosha caadiga ah.